टिप्स र ट्रिक्स Archives - Page2of2- ICT Frame Technology
Category: टिप्स र ट्रिक्स
युट्युबमा भिडियो हेर्दा किबोर्ड सर्टकट प्रयोग गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ । यहाँ युट्युब सर्टकटको बारेमा चर्चा गरौँः १) K : पज या प्ले गर्नका लागी २) J : १० सेकेण्ड रिवाइन्ड गर्नका लागी ३) L : १० सेकेण्ड अगाडी बढाउनका लागी ४) M : साउण्ड बन्द गर्नका लागी ५)0: भिडियोलाई सुरुदेखि हेर्नका लागी, १ देखी ९ सम्मका नम्बर दबाएपछि भिडियोको १० देखी ९० प्रतिशत टाइमसम्म सकिन्छ । थप युट्युब किबोर्ड सर्टकट Action Shortcut Toggle play/pause…
"युट्युबमा भिडियो हेर्दा यी किबोर्ड सर्टकट प्रयोग गर्नुहोस्"
दूरसञ्चारको क्षेत्रमा प्रचलित नाम हो, भ्यालु एडेड सर्भिस अर्थात् भ्यास । टेलिकम्युनिकेसनको प्रयोग गरेर डाटा, भ्वाइस वा एसएमएस मार्फत दिइने सेवा भ्यासमा पर्दछन् । भ्यालु एडेड सर्भिस अन्तरगत विशेष गरी कलर रिङव्याकटोन, न्युज अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, मिसकल अलर्ट लगायतका अाधारभूत सेवा बाहेकका अतिरिक्त सेवा भन्ने बुझिन्छ ।
"भ्यालु एडेड सर्भिस (भ्यास) के हो ?"
परम्पारागत इन्टरनेट भन्दा यसको गति निकै गुणा छिटो हुने गर्छ । ब्रोडव्याण्डले एकै पटक विभिन्न सिग्नल र विभिन्न गतिको इन्टरनेट पठाउन सक्छ । ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको प्रशारण माध्यम अप्टिकल फाइबर, रेडियो वा कोएक्सिल तार हुने गर्दछन् । र वायरलेस, स्याटेलाइट तथा केबल ब्रोड ब्यान्ड इन्टरनेटका केही उदाहरण हुन् । यसको डाउनलोड र अपलोड क्षमता पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च गतिको हुने गर्छ ।
"के हो ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेट ?"
विद्युतीय उपकरणहरू कम्प्युटर, मोबाइल तथा यसको नेटवर्कका माध्यमबाट हुने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक कार्यलाई साइबर अपराध भनिन्छ । इन्टरनेटको विस्तार भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा क्रमशः बढ्दो अपराधका कारण नेपालमा समेत ‘विद्युत्तीय कारोबार ऐन २०६३’ को व्यवस्था भएको हो । इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट फ्रड (धोकाधडी), अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैङ्किङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पु¥याउने क्षतिलगायत अवैधानिक…
"के हो त साइबर अपराध ? अजय शर्मा"
जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष हो मोबाइल । त्यही मोबाइल नै बेला बेलामा ह्याङ भइरह्यो भने एकदमै तनाव बढ्ने गर्छ, उक्त तनावबाट छुटकारा पाउने ५ उपायहरु : तपाईंको मोबाइलमा कुनै एप्लीकेशन छ भने, यसले मोबाइललाई ह्याङ्ग बनाइरहेको हुन्छ । त्यसलाई एक्सटर्नल मेमोरीमा ट्रान्सफर गर्नुहोस् । यसले इन्टर्नल मेमोरी खाली हुन्छ । सकेसम्म एप्लीकेशन इन्सटर्ल गर्दा नै सिधै एक्सटर्नल मेमोरीमा गर्नुहोस् । सेटिङमा जानुहोस् र स्टोरेजमा गइ त्यहाँ एसडी कार्डको विकल्प चुन्नुहोस् । यो सुविधा दुई मेमोरी भएकालाई…
"Keep your Smartphone from Getting Hanged"
Repoter Chiranjibi Adhikari August 27, 2017 0